AVG VPN Review (2020) - Tena mila an'ity ve ianao? - Famerenana
Ny Virtual Private Network (VPN) dia nitombo laza tato ho ato. Ny vaovao momba ny varotra data sy ny dokam-barotra avy amin'ny antoko fahatelo mety hitrandrahana fiainana manokana dia nahatonga ny olona hanana fahatsiarovan-tena. VPN dia tsy isalasalana fa tombony lehibe ho an'ny olona amin'ny Internet.
Anisan'ireo VPN ireo, misy iray miavaka noho ny anarany sy ny fahatokisany azy, ny AVG VPN. Ankehitriny, raha tsy fantatrao, Avast dia nahazo AVG tamin'ny 2016, fa miasa kosa ireo singa roa. Na izany aza, ny AVG VPN dia manana fitoviana maromaro amin'ny Avast's VPN (SecureLine).
Raha manontany tena ianao raha mendrika ny hahazoana ny mpizara AVG na tsia, hitondra anao fahalalana feno ity famerenana ity. Izy io dia manarona ireo anton-javatra tena ilaina tokony hoheverinao alohan'ny mividiana VPN ary mandray fanapahan-kevitra fohy amin'izany.
Mitady tolotra VPN mahavariana? Taratasim-bola Zoma Mainty VPN Amidy avy amin'ny NordVPN & ExpressVPN.
AVG VPN - Famerenana amin'ny antsipiriany ny endri-javatra rehetra
Alohan'ny hidiranao amin'ny famerenana dia eritrereto ny AVG ho toy ny mpanome tolotra VPN. Tsy manana fiasa manintona maro izay nanjary fanao ho an'ny mpamatsy VPN premium na ankapobeny. Na izany aza, manana interface interface mora izy io ary misy layout tsotra noho ny tsy fisian'ny endri-javatra sarotra.
Manana mpizara 55 mahery ny AVG amin'izao fotoana izao, ary misy any amin'ny firenena 37 izy io. Raha ampitahanao amin'ny VPN VPN feno sy lehibe toa an'i Nord izy io, dia tsy vintana ny AVG. Na izany aza, ity famerenana ity dia mifantoka amin'ny fanombanana ny zava-bitan'ny AVG sy ny sandany ankapobeny hanampiana anao hanapa-kevitra. Noho izany, tsy hahazo fampitahana maro ianao fa fanadihadiana feno momba ny serivisy VPN.
AVG dia manana tombony lehibe amin'ny maha-mpamatsy VPN tsy dia fantatra loatra. Na izany aza, ampifandraisina amin'ny anarana lehibe izy io. Arak'izany, mora ny mahazo Geolocked haingana kokoa. Ny geolock dia rehefa manapa-kevitra ny mpanome serivisy (tranokala, fampiharana sns) hanakana mpizara VPN mpizara. Ny VPN dia miasa indrindra amin'ny fampifandraisana anao amin'ny mpizara amin'ny toerana hafa.
Saika ny mpamatsy VPN rehetra dia miasa am-pahazotoana amin'ny famolavolana lozisialy vaovao hitondra anao haingana hafainganam-pandeha. Isika rehetra dia maniry ny hafainganana handoavantsika vola, fa ny VPN kosa dia mila famerenana amin'ny laoniny ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny mpizara hafa. Matetika, midika izany fa hisy ny tsy fahampian'ny hafainganana. Indraindray mety ho lehibe ny banga.
Azo antoka fa malaina ny AVG ao amin'ity departemanta ity. Ny mpizara azy dia tsara amin'ny faritra eropeana, miaraka amin'ny fikojakojana hafainganam-pandeha 90%. Any amin'ny faritra Amerika Avaratra dia mitazona ny hafainganam-pandeha 75% eo ho eo. Na izany aza, ny serivera any amin'ny firenena sy faritra hafa dia misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny hafainganana, manodidina ny 10-25% amin'ny zavatra azonao atao ambony indrindra.
Ity hafainganam-pandeha ity dia mbola mety ihany streaming na fisintomana atiny . Na izany aza, tsy hamela anao hanana tombony betsaka amin'ny asa aman-draharaha miaraka amin'ny fanampian'ny mpizara hafa. Ka malaina any.
2. Ny firazanan'ny atiny
Ny fampiasana voalohany ananan'ny ankamaroan'ny olona amin'ny VPN dia ny fidirana amin'ny atiny voafetra na voarara. Afaka mandray fanapahan-kevitra ianao ary manan-jo hijery ireo atiny tianao. Na izany aza, maro ny mpanome tolotra mivantana na governemanta mametraka fehy na fameperana an'ity atiny ity.
VPN mamela anao handefa ity atiny ity. Andao hojerentsika ny fahombiazan'ny foara AVG amin'ny fidirana amin'ny atiny amin'ireo sehatra samihafa.
3. Fahazoana mivantana
Na eo aza ny tsy fisian'ny mpizara, manana fidirana amin'ny serivisy fiderana mendri-piderana ny AVG. Azonao atao ny mamoha Netflix na rindranasa malaza hafa ary mikoriana ho an'ny faritra misy anao. Amin'ny ankapobeny, tsio-drivotra ity, ary hanana fidirana amin'ny atiny premium ianao.
Na izany aza, raha tsy mampiasa vola ny AVG amin'ny famoronana lozisialy marin-toerana kokoa dia azo inoana fa ho lasibatry ny orinasa lehibe hanidy ny lohamilina izany. Amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo mpamatsy VPN azo antoka indrindra amin'ny famoahana atiny an-tserasera. Araka ny efa fantatrao, manolotra hafainganam-pandeha mety ho an'ny fifandraisanao izy, na dia amin'ireo mpizara tsy dia mahomby aza.
4. Torrent miaraka amin'ny AVG VPN
AVG dia mahavita zavatra tsy ampoizina amin'ny resaka riandrano ary mametraka fifandraisana. Na izany aza, misy ny tsy fahampian'ny fampitana seranana, noho izany dia somary tsy manome toky kely akory izy io. Ny fifandraisana peer-to-peer dia misy amin'ny AVG, ary izany koa mitovy amin'ny mpanome tolotra VPN premium maro. Noho izany, afaka mitsabo tena amin'ny hatsaran'ny AVG ianao amin'ity sehatra ity.
Na izany aza, ny tsy fisian'ny mpizara sy ny fidirana dia mety mbola hiteraka fihoaram-pefy sasany. Tsy ampy ny manala anao fa mety mitaky anao hanao fizahana alohan'ny hisafidianana mpizara.
5. Fahaizana fiarovana
Ny VPN tsara dia tokony hitondra filaminana tsara indrindra ho anao. Izany no teboka fivarotana mahasarika indrindra an'ny VPN satria mampihena ny fandrahonana mety hitranga amin'ny fifandraisanao izany. Alohan'ny hampiasanao serivisy VPN dia zava-dehibe ny mandinika ny lafiny fiarovana azy.
Tsara ny streaming sy ny atiny, saingy eto no hanananao fahasamihafana lehibe. Ity misy topy topimaso momba ny fiarovana AVG:
Izy io dia manana encryption 256-bit, izay tena miavaka amin'ny resaka fiarovana, indrindra amin'ny OpenVPN. Na izany aza, mazava ho an'ny PC izany, ary ny fitaovana hafa tsy manana an'ity encryption ity. Noho izany, safidy tsara izany raha tianao izany fiarovana izany amin'ny PC-nao, saingy tsy dia mandeha amin'ny finday avo lenta izany.
Ny tsy fahampian'ny smartphone sy ny encryption fitaovana hafa ao amin'ny tontolon'ny haitao misy haitao nomerika dia mametraka tokoa ny ligin'ny AVG ao ambadiky ny mpamatsy VPN hafa.
Tsy misy adblocker ao amin'ny app VPN. Ny tsy fisian'ny endri-javatra dia manome antoka fa hividy ny tranokala AVG ianao izay mitondra fahaiza-manao fanakanana doka. Tsy misy koa ny fanoherana anti-malware. Raha tsorina, ny AVG dia tsy manana ny fiarovana faran'izay betsaka azon'ny mpanome tolotra VPN natolotra anao.
8. Rakitra firaketana
Betsaka ny mpanome tolotra VPN no nitondra revolisiona vaovao tsy fitahirizana data momba ny mpampiasa mihitsy. Tsy misy ny fitrandrahana ala, ary misy aza manolotra fifehezana ireo mpampiasa. Azonao atao ny manapa-kevitra raha tianao ny rakitsoratry ny kaontinao na tsia, ary hotehirizina soa aman-tsara ireo. Tsy misy amin'ireo safidy ireo ny AVG.
Tsy manara-maso ny asanao amin'ny Internet fa azo antoka fa manara-maso ny hazo. Oviana ianao no nifandray, ohatrinona ny fantsom-pifandraisana nampiasanao? Ireo fampahalalana rehetra ireo dia voasoratra mandritra ny 30 andro. Raha lazaina amin'ny teny hafa, na dia tsy voatery hanimba aza izany dia mitazona hidim-baravarana ny AVG. Noho izany, tsy dia atokisana toy ny VPN hafa eny an-tsena.
Mampifanaraka ny AVG VPN:
Ny AVG VPN dia azo jerena voalohany amin'ny varavarankely raha te hiditra amin'ny fiarovana sy ny endriny feno ianao, na dia tsy betsaka aza izany. Azo ampiasaina amin'ny finday avo lenta sy fitaovana hafa izy io, saingy faran'ny sisin-tany sy mihetsika raha vantany vao apetrakao amin'ny fitaovanao.
Mampalahelo fa tsy misy mifanentana amin'ireo mpamily, konsole lalao na fahitalavitra mahira-tsaina. Na ny mpampiasa Linux aza tsy maintsy manangana ny VPN ary mametraka azy amin'ny tanana. Amin'ny ankapobeny, ny AVG dia manana tahan'ny fampifanarahana ambany. Izy io dia mety amin'ny varavarankely indrindra.
Fitsapana maimaimpoana AVG VPN Premium VS AVG VPN:
Tsy misy ratsy maimaim-poana, ary toy izany koa amin'ny serivisy VPN, raha toa ka misy orinasa premium manohana ny kalitaony. Ireo mpanome tolotra VPN hafa dia manolotra fanandramana mandritra ny fito andro raha be indrindra. Mety tsy ho ampy ho an'ny olona maro ny mamaritra ny mety ho serivisy VPN.
Mandritra izany fotoana izany, ny AVG VPN dia mitondra anao 30 andro fitsapana maimaimpoana izay tsy mitovy amin'ny fitsapana hafa. Manome anao fotoana mahafa-po hahafantarana raha ho anao na tsia ity VPN ity. Mahazo miditra tanteraka amin'ireo fiasa sy serivisy premium ianao. Na izany aza, tsy misy betsaka amin'izany.
1. Sarobidy amin'ny vola
Raha miresaka momba ny tena vidin'ny fisoratana anarana sy ny sandan'ny vola ianao dia tsy mendrika izany ny AVG. Farafaharatsiny, malaina be izy raha tsy raha ampitahaina amin'ireo mpamatsy hafa mahazatra. Izy io dia manana fonosana famandrihana izay mitentina betsaka amin'ireo mpamatsy VPN avo lenta. Ka raha tena te hisoratra anarana ianao dia tsara kokoa ny mandinika VPN hafa.
2. Politika famerenam-bola
Misy ny politika famerenam-bola VPN 30 andro. Raha tsy afa-po ianao dia azonao atao ny mangataka famerenam-bola ao anatin'ny 30 andro. Tsy misy fepetra miafina na fetran'ny bandwidth azonao ampiasaina amin'ny fahazoana mandoa vola. Raha tsy afa-po ianao dia hahazo famerenam-bola.
3. Fanohanan'ny mpanjifa
Ho fampiasana maimaim-poana, ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia tsy mahafa-po satria manana safidy safidy tsara indrindra ianao izay mifandray amin'ny valin'ny bot. 24/7 izao fa tsy mendrika, ampy hanangonana vaovao. Raha mila fanampiana maharitra ianao dia mila misoratra anarana amin'ireo serivisy. Ny fikarakarana ny mpanjifa ho an'ny mpiaro kilasy premium dia tsara kokoa.
Raha mila serivisy VPN baseline ianao, dia hanao ny asa ny AVG, saingy azo antoka fa tsy mendrika ny vola amin'izao fotoana izao. Nisy ny fitarainana sasany avy amin'ireo mpampiasa mikasika ny fifandraisana. Izany dia vokatry ny tsy fisian'ny mpizara. Raha tsy mahavita mitombo ny orinasa dia tsy handeha tsara izany, ary misy safidy tsara kokoa ho an'ny VPN ambaratonga voalohany.
Ny orinasa dia minia manandrana mivarotra ho anao amin'ny rindrambaiko isan-karazany sy serivisy azonao atao amin'ny famandrihana tokana avy amin'ireo mpamatsy VPN hafa. Raha mitady VPN miasa any Shina ianao dia tsy hahomby koa VPN. Tsy mendrika ny vola izany, ary tokony handinika mpamatsy hafa ianao.
Na izany aza, raha te hankafy ny fanandramana mandritra ny 30 andro VPN mendrika ianao fa tsy VPN maimaim-poana azo itokisana eny an-tsena dia asa mendri-piderana izany. Tsy dia manana endri-javatra firy izy io fa ny interface mivantana. Amin'ny ankapobeny, tsy AVG no VPN tsara indrindra eny an-tsena. Na dia tsy ampitahanao amin'ny VPN hafa aza izany dia tsy manolotra firy ho an'ny serivisy avo lenta.
Ny Princess Switch 3: Mientanentana ho an'i Vanessa Hudgens
amazon prime vs mpianatra amazon
ohatrinona ny prime amazon ho an'ny mpianatry ny oniversite
horonantsary dimy maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana
ny fomba fihainoana mozika amin'ny wifi an-tsekoly
ny fomba fampidinana fizarana amin'ny netflix amin'ny mac
ny fomba fandehanana amin'ny youtube rehefa voasakana izy io